Lahatsoratra momba an'i Silia
Ahoana ny fomba fangatahana Asylum any Chili? Fantaro eto!
Septambra 15, 2020 Karuna Chandna Shily, mpitsoa-ponenana
Nanapa-kevitra ny minisiteran'ny raharaham-bahiny sy atitany ny fanaovana sesitany ireo mpitsoa-ponenana any Chile. Miara-miasa amin'ny vaomieran'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana (UNHCR). Nametraka lasibatra isan-taona ihany koa izy ireo amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny tranga voafidy dia eo amin'ny fangatahana taratasy. Rehefa misy
Ahoana no fomba fampiharana ny fangatahana visa Chili?
Enga anie 23, 2020 Antika Kumari Shily, visa ho
Mangataha Visa any Chili- Mila fantatrao ny antony ilainao fangatahana ny fangatahana visa chile. Azonao atao ihany koa ny miantso ny 044716270 (# 5) na mandefa mailaka-consulate@embchile.co.nz Raha eny, araho ny torolàlana etsy ambany. Dingana hatao amin'ny fampiharana